စိုင်ဖူမူလက်ကန် - ဝီကီပီးဒီးယား
34°52′37″N 73°41′40″E﻿ / ﻿34.876957°N 73.694485°E﻿ / 34.876957; 73.694485ကိုဩဒိနိတ်: 34°52′37″N 73°41′40″E﻿ / ﻿34.876957°N 73.694485°E﻿ / 34.876957; 73.694485
၂.၇၅ km2 (၁.၀၆ sq mi)
၁၁၃ ft (၃၄ m)
၃,၂၂၄ မီတာ (၁၀,၅၇၇ ပေ)
စိုင်ဖူမူလက်ကန် (အူရဒူ: جھیل سیف الملوک‎‎) သည် နရန်မြို့အနီး စိုင်ဖူမူလက်အမျိုးသားတွင် တည်ရှိသည့် တောင်တန်းများတွင် တည်ရှိသည့် ရေကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤကန်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၂၂၄ မီတာ (၁၀၅၇၈ ပေ) တွင် တည်ရှိသည်။ ဤကန်သည် သစ်ပင်များ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နိုင်သည့် အမြင့်တွင် တည်ရှိပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ရေကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကာဂန်ချိုင့်ဝှမ်းရှိ တောင်တန်းများကို ဖြတ်သန်းကာ စိုင်ဖူမူလက်ရေကန်သို့ သွားရသည်။ ဤကန်သည် နရန်မြို့၏ မြောက်ဘက် ၉ ကီလိုမီတာခန့် (၅.၆ မိုင်) အကွာ၊ Khyber Pakhtunkhwa စီရင်စု၏ Mansehra ခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ Malika Parbatသည် ကန်အနီးတွင် တည်ရှိသည့် ချိုင့်ဝှမ်းတွင် တည်ရှိသည့် အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ် ဖြစ်သည်။
ကန်သို့ နွေရာသီတွင် အနီးအနားရှိ မြို့ဖြစ်သည့် နရန်မြို့မှ သွားရောက်နိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် နှင်းများပြင်းထန်စွာကျဆင်းပြီး မြေပြိုမှုများသည် ကန်နှင့် အခြားဒေသများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသဖြင့် သွားလာမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။
အောက်ပါရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖော်ပြချက်များကို သိရှိနိုင်ရန် Hover (အပေါ်သို့ရွှေ့) သို့မဟုတ် ကလစ်နှိပ်ပါ။
↑ Surface Elevation of Lake Saiful Muluk။
↑ Distance from Naran။
↑ Ali၊ Ihsan။ "Natural Heritage of Kaghan Valley"။ Mapping and Documentation of the Cultural Assets of Kaghan Valley, Mansehra (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ Islamabad: UNESCO။ p. 46။ 12 July 2018 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Traditional Medicinal and Economic uses of Gymnosperms of Kaghan Valley, Pakistan" (5 March 2006). Ethnobotanical Leaflets 10. ISSN 1948-3570.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိုင်ဖူမူလက်ကန်&oldid=664980" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။